China 8oz 250ml tavoahangy veromanitra amina vy tsy misy fangarony fanodinana paompy fanamboarana sy orinasa | Easypack
8oz 250ml tavoahangy vera amber miaraka amina dispenser vy tsy manisy vy
Ny tavoahangy vera boribory AMBER misy paompy tsy misy fangarony dia mpamatsy savony tena tsara ary azo ampiasaina ho tavoahangy shampoo, na ho an'ny fisondrotana na fanosotra. Tavoahangy fitaratra mainty no ampiasaina hitehirizana menaka manitra / aromatherapy mifangaro satria miaro ny menaka amin'ny masoandro ireo, ka manampy azy ireo hihazona azy ireo ho ela kokoa.
Sady misy puera no manome dispenser!
Ny tavoahangy veromanitra 500ml amber dia miaraka amina famokarana fantsom-boaloboka / savony tsy misy fangarony 304, mitondra fahatsapana tsy manam-potoana sy mahazatra ao an-tranonao. Mety eo akaikin'ny fandroana fandroana na lakozia. Fampiasana miverimberina hampihenana ny fako ateraky ny fonosana.
Ity dispenser mpanadio tanana azo ampiasaina ity dia manome safidy eco-friendly izay manambatra endrika tsara tarehy miaraka amin'ny fiasa.
Vita any Shina izy io miaraka amina vera amber azo amboarina sy paompy vy tsy misy harafesina. Ity dispenser ity dia azo ampiasaina amin'ny savony tianao ary hampihena ny fako plastika afaka taona vitsivitsy.
Ho an'ireo izay maniry ny hampiditra fomba amin'ny fitoerany milentika, na ireo izay mividy savony amin'ny votoatin'ny savony / refill, dia tsara ny dispenser.
Vita amin'ny vera soda-sokay amber tena tsara kalitao.
Mifanaraka amin'ny fikatonantsika 45mm.
Misy tavoahangy manana fahaiza-manao lehibe kokoa.
Previous: 0,5oz 1oz 2oz 4oz kobalt biron-tavoahangy boribory boribory misy fantsom-bozaka mainty plastika
Manaraka: 355ml 12oz tavoahangy savony vita amin'ny vera mazava miaraka amin'ny dispenser matte vy tsy misy fangarony
16 Oz tavoahangy vera amber misy paompy
Tavoahangy paompy amam-borona
Tavoahangy apotekera misy paompy
Tavoahangy paompy apothecary
Tavoahangy paompy fitaratra mainty
Tavoahangy fitaratra misy ambony paompy
Tavoahangy paompy mihosin-kazo fitaratra
Ambongadiny tavoahangy fitaratra
Tavoahangy paompy lehibe
Tavoahangy paompy kely
Tavoahangy paompy boribory boribory 16oz misy plasti ...
8oz 16oz matte black black savony dispenser glas ...
16oz 500ml loko fotsy boston boribory vera toaka ...
355ml tavoahangy savony 12oz mazava vera miaraka amin'ny ...
8oz amber boston boribory fitaratra savony tavoahangy w ...
Tavoahangy savony vita amin'ny tànana 400ml misy ste ...
Tavoahangy fitaratra misy paompy famaohana, Tavoahangy paompy fitaratra ho an'ny menaka tena ilaina, Tavoahangy paompy fitaratra ho an'ny shampoo, Tavoahangy paompy fitaratra, Tavoahangy fitaratra fitaratra misy paompy, Tavoahangy fitaratra miaraka amina famoahana paompy,